Ansomone 200 IU Somatropin HGH, utengese humoni hukura muThailand
Regular price 17,000.00 ฿ sero
Recombinant Human Growth Uwandu hwemakemikari for Injection
(Somatropin / HGH, rDNA Akatanga)
Ansomone® inonzi yakashata, yakagadzirwa lyophilized ye Recombinant Human Growth Hormone (HGH) ne 191 amino acids, yakabva kune inguvo E.coli, uye yakafanana nehupenyu hwekukura kwehomoni muine amino acid nekuenzanisa uye nhatu-dimension structure. Ansomone® inoratidzirwa kukura kwekukura nekuda kwekusagadzikana kwekukura kwehomoni (GHD) uye chirwere che Turner kana kusagadzikana kwezvipi. Ansomone® inogona kushandiswa kuporesa chirwere chekuvhiya kana kupiswa kwemaonda uye ine simba rakanaka kuchengetedza kukwegura kwevanhu. Nhasi kushandiswa kwezvirimwa zve Ansomone® zvakagadziriswa neGMP Standard neSFDA.
Zita rechizvarwa: Recombinant human growth hormone yejection.
Zita rebazi: Ansomone®
Kuumbwa kwakagadzirwa: Kubata kwemahomoni ekukura kwehomoni.
Ansomone® inoita zviito zvakafanana zvekusagadzikana kwevanhu kukura hormone. Iyo inogona kukurudzira kupararira nekusiyanisa kwe epiphysis chondrocyte, kukurudzira kukura kwezvinyorwa zvemasumbu masero, zvinokurudzira kupararira nekusiyanisa kwe osteoblast; saka inowedzera kuwedzera kwekambani yekuwedzera uye kuvandudza epiphysis width. Ansomone® inogona kusimudzira mapuroteni mumuviri wose; kudzorera iyo yakaipa nitrogen equilibri inokonzerwa neronda uye kuvhiyiwa; ruramisa hypoproteinemia nemhaka yehutachiona chakanyanya kana hepatocirrhosis; kukurudzira maitiro ekudzivirira immune uye kupararira kwe lymphadenoid, macrophage uye lymphocyte, nokudaro kuwedzera kukwanisa kwekudzivirira zvirwere; kukurudzira kupararira kwe collagenocyte, fibroblast uye macrophage munzvimbo dzekupisa nokuvhiyiwa, nokudaro kukurumidza kuporesa maronda; kukurudzira kunyanya kwema cardiocytes, nokudaro kunatsiridza chibvumirano chepfungwa uye kuderedza mwoyo yeakisijeni yekushandisa; kuronga lipometabolism, nokudaro kudzvinyirira serum cholesterol uye kuderera kweepoprotein level; kuenzanisa kusakwana kana kushayikwa kwekukura kwehomoni, kuronga vanhu vakuru lipometabolism, osteometabolism, moyo uye mafungiro empi.
Zvinodaro kuti maitiro ehutano akaenzana anogona kuwanikwa kuburikidza ne subcutaneous (sc) kana intramuscular (IM) kutungamirirwa. Kunyange zvazvo sc inogona kutungamirira yakadzika yeGH mu plasma, IM inokwanisawo kubudisa imwechete yeGF-l. Kubatwa kweGH kunononoka, Cmax inowanzoitika paawa 3-5 mushure mejojo. Kuchenesa kweGH kunotapukira neropa uye nehvo, hafu yehupenyu hwekusununguka inenge maawa 2-3. Uncatabolized GH yakadhindwa murea inenge isingagoni kuenzaniswa. Zvose zveGH muhutachiona huripo sefomu yakaoma neGH kusunga mapuroteni anoita kuti hafu yeupenyu hweGH iwedzere.
Ansomone® inoratidzwa nokuda kwekukundikana kwevana nekuda kwekusagadzikana kwekukura kwehomoni (GHD).
- Kuita muviri uye kuvaka muviri
- Nhare Dzakakwirira
- Kuwedzera kweBurin Function
- Basa Guru reMusununguko
- Kuvandudza Cholesterol Prodfile
- Kurumidza Kukuvara Kuporesa
- Kuwedzera zvepabonde Llibido
- Wedzera Kuwedzera Kwemapfupa
Kana kugadziriswa 1 ml yakachena mvura yejojo ​​inofanira kuiswa mukati merusvingo rwebhodhoro, uye fukidza chigadziko nemhepo yakanyanyisa rotary kusvikira zvinyorwa zvichanyunguduka zvachose, usagunun'una zvakanyanya.
Nhamba yakarongedzwa ye Ansomone® yekurapa vana kukura kwekukundikana ndeye 0.1 ~ 0.15IU / kg zuva rega rekutengesa kwemazuva emwedzi 3 kusvika ku3 yemakore. Therapy regimen inogona kugadziriswa maererano nevanachiremba vanoziva mazano.
Nhamba yakarongedzwa ye Ansomone® yekurapa kushata kwakanyanya ndeye 0.2 ~ 0.14IU / kg zuva rega rega subcutaneous administration kwevhiki dze2.
Kukura kwehomoni kunogona kukonzera hutachiona hwehutachiona hwemhepo; Inogona kudzorerwa sezvo hutungamiri huchienderera mberi kana huri kupera.
Kukanganisa kwakashata kwakaitika munharaunda ye1% shoma shoma mukutongwa kwekliniki. Kukanganisa kwakaipa kunowanzobatanidza marwadzo maduku, turu, turgescence pedo nenzvimbo yejojo ​​uye paripheral edema, arthralgias. Zvose izvi zvinopesana nezvakaitika zvinowanzoitika pakutanga kwekurapa, uye dzaive dzenguva uye dzinonzwisisika. Yenguva refu uye mizinga yepamusoro kutungamirirwa kweRhGH inogona kukura ma antibodies mune vashoma vaswere. Kunyange zvakadaro, maitiro ekurwisana anokwanisa kunge asingawanzokwanisi kusvika kune 2 mg / L iyo inogona kukanganisa maitiro ekurapa.
1. Ansomone® haifaniri kushandiswa kune varwere vane epiphysis vakanga vadzidzirwa.
2. Ansomone® haifaniri kushandiswa mukurapa varwere vane neoplasia inoshanda. GH kurapwa inofanira kuregwa kana uchapupu hwokuti neoplasia hukavapo.
3. Ansomone® haifaniri kushandiswa kune varwere vari mukutya kwechikwata chakakura nehutachiona hwakakomba.
1. RhGH therapy inofanira kuitiswa pavanonyatsozivikanwa nevarwere veGHD pasi pezano rechiremba ane ruzivo.
2. Kune chirwere cheshuga, chirwere chema anti-glucourea zvinodhaka chinofanira kugadziriswa panguva yeRHGH.
3. Kune varwere vane chirwere cheGHD chakakonzerwa ne encephaloma kana ronda rakareba, kufambira mberi uye kudzokerazve kune zvingave zvirwere zvinogona kuongororwa zvakanyatsocherechedzwa.
4. Nokuda kwekushaya varwere kweAIDS, kuyerwa kweAATCH kunofanira kugadziriswa nokuti kukura kwekuwedzera kwehupenyu hweRhGH kunogona kudziviswa nekushandisa pamwe chete kweAACTH.
5. Utachiona gland basa rinofanira kuongororwa nguva dzose nokuti kliniki hypothyroidism inogona kuitika kune vamwe varwere munguva yeRHGH kurapa. Kune iyo hypothyroid, thyroid supplementation inofanirwa kuchengetedza mishonga yekurapa yeRhGH.
6. Kunyatsofungisisa kunofanira kutorwa kana kupesana kuchiitika panguva yeRHGH kurapwa nokuti varwere vane chirwere chendocrine chirwere (kusanganisira GHD) vane tsika yakadaro yokuti ma epiphysis mapepa emadzimai anenge ari nyore kuparadzana.
7. Kukura kwehomoni kunogona kutungamirira kune insulin yenyika, kutarisirwa kunofanira kubhadharwa kana kusagadzikana kweglucose kusina kuonekwa.
8. Usatora-dose yeRhGH, imwe nguva inopfuura-dose rhGH kutungamira kunogona kutungamirira kune shuga shoma yeropa ndokubudirira nehupfukidzi yepamusoro yeropa. Nguva yakareba-inopfuura-inoita rhGH kutungamirira inogona kutungamirira kuacromegaly.
9. Injection site inofanira kunge yakasiyana-siyana kana lipoatrophy.
KUTAMBIRA NEVABHABHI-VANHU VANHU VANOSHANDISWA
Hazvikurudzirwi nekuda kwevakadzi vane pamuviri uye vakwegura kubvuma rhGH kurapa.
Mhinduro yeRhGH yevana yakafanana neyevakuru mu pharmacology, toxicology uye pharmacokinetics, rhGH yakachengeteka pakushandisa vana.
Kupindura kwa rhGH yekare varwere kwakafanana neyevakuru mu pharmacology, toxicology uye pharmacokinetics, rhGH yakachengeteka kushandisa geriatric.
Mhinduro ku rhGH chirwere chinogona kuvharwa ne glucocorticoid, kuitira kuti hydrocortisone muyero ive yakaderera kupfuura 10 ~ 15mg / m2 yemuviri panguva yeRhGH.
Kushandiswa panguva imwe chete yeas-androgenic steroid munguva yeRhGH kurapa kunogona kukurumidza kukura kwekura.
Hapisisina ripoti pamusoro pemutengo we rhGH; Zvisinei, kuwedzerwa kuwedzerwa kunogona kukonzera chimwe chinhu chinopisa, zvakadai se hypoglycemia pakutanga uye kubudirira ne hyperglycemia. Nguva yakareba kudarika kuwedzerwa kushandiswa kwe rhGh kunogona kutungamirira kune acromegaly.
Ramba pa 2 ~ 8ºC kure nemwenje. Iyo yakagadziriswa sarudzo yakasanganiswa neSterile Water yejojo ​​inokurudzirwa kuchengetwa pa 2 ~ 8ºC kwemaawa 48, usasviba.